musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hotera & Resort Nhau » Purofiti yehotera inokwira, asi icharamba yakadaro?
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • China Kuputsa Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Indasitiri yehotera inoramba isina kusimba, ichikwenenzvera chipingamupinyi chimwe nechimwe chitsva chakakandirwa munzira yayo.
Indasitiri yehotera yeUS inoenderera mberi ichiona kukwira kwayo kwemari.
MuEurope, kuita kwehotera kunoramba kuchikwenya pasi.
MuAsia, mashandiro eChina emahotera ehotera anga achienderana.
Kuita kwepasirese kwepahotera kuri kuwedzera mwedzi nemwedzi. Ndiwo mashoko akanaka. Kushushikana kwakanyanya ndekwekuti zvicharamba zvakadaro. Indasitiri yehotera inoramba isina kusimba, ichikwenenzvera chipingamupinyi chimwe nechimwe chitsva chakakandirwa munzira yacho.
Iyo nyowani nyowani yave iri Delta musiyano, iyo yakonzera COVID makesi kutsemura munzvimbo zhinji uye kukanda wrench mune zvishoma nezvishoma rebound. Vhiki rino chete, European Union yakakurudzira kuti maAmerican arambidzwe kubva kune zvisingakoshi kufamba kuenda kunhengo dzenyika mushure mekukwira kwezviitiko muUS Izvi sezvo US inoramba iri pamiganhu kune vazhinji vafambi veEurope.
Zvakadaro, indasitiri yehotera inotsikirira kumberi.
Kunyangwe matunhu ese aine imwe nguva vasati vaenzana nenhamba yepamberi yedenda re2019, kugadzirisa kwemwedzi-kusvika-mwedzi kuri kukurudzira. Iyo USA inoenderera mberi nekuona kukwira kwayo kwemari: RevPAR muna Chikunguru 2021 yaive inodarika $ 20 yepamusoro kupfuura mwedzi wapfuura uye ikozvino yave pamusoro pe1,000% yepamusoro pane payaive muna Kubvumbi 2020, iyo nadir yekuita kwehotera.
Kugara kwakawedzera kusvika ku60% mumwedzi, zvichibatsira kuwana mafuta muhomwe yemari muhotera. Zvichakadaro, vashandi vari kuenderera mberi, asi sehotera, kunyanya mumisika yekutandarira, inodzokera kumashure, mubhadharo uri kukwira mudanho. Funga nezve Miami Beach: Yese payroll yakarova $ 92 paimwe nzvimbo inowanikwa muna Chikunguru 2021, chete $ 18 kubva paJuly 2019 nhanho uye 143% yakakwira kupfuura panguva imwecheteyo gore rapfuura.
Mari yepamusoro irikubatsira peturu zvirinani mashandiro ekuita, neUS ichirova $ 67 mumwedzi, 18% kubviswa panguva imwe chete mu2019.
EU Vax Rate Inokwira
MuEurope, uko muEU mwero wekupora wakakwira kupfuura US, kuita kwehotera kunoramba kuchikwenya pasi. Izvo zvinogona, zvakadaro, shanduko nekuda kwekubudirira kuburitsa majekiseni, ayo akawedzera manzwiro mukondinendi yose kubva kune vafambi nevashambadzi, zvakafanana.
Middle East Kusapindirana
Mushure mekunyepedzera purofiti muna Kukadzi 2021 naJune 2021, GOPPAR yakakwira muna Chikunguru, ichirova $ 29, chete 11% kubva paChikunguru 2019 nhanho uye inopfuura 1,900% yakakwira kupfuura muna Chikunguru 2020, apo GOPPAR yakachinja.
Mitero yemitero yakanyatso tarisa mibairo yemubhadharo, chigadzirwa chemitengo inodzorwa, iyo yakaona manhamba emubhadharo achienzanirana mushure mespiki muna Kukadzi iyo yakabatsira kukonzeresa kudzikira.
MuAsia, ChinaKuita kwave kuchienderana. GOPPAR yakapfura kumusoro mushure mekudzika kwerima muna Kukadzi. Zvino, kubva muna Chikunguru 2021, GOPPAR yave $ 2 yakakwira kupfuura zvayaive muna Chikunguru 2021, chinhu chinokatyamadza uye chimwe chingangove chakakonzerwa nenyaya iri pachena yekuti nyaya dzeCOVID munyika dzadzikira kusvika padyo zero mushure mesviro yeECVID.